2019 #NABShow: Artificial Intelligence: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချို့သောအနာဂတ်အခုတော့ပစ္စုပ္ပန် Is - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » 2019 #NABShow: Artificial Intelligence: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချို့သောအနာဂတ်အခုတော့ပစ္စုပ္ပန် Is
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ Artificial Intelligence အစိတ်အပိုင်းမရှိတော့အနာဂတ်အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်မှု၏စိတ်နှလုံးထဲသို့အလျင်အမြန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ AI အပေါ့ပ်သီချင်းတွေကိုဖန်တီးရေးနိုငျသညျ, ကကြေကွဲတဲ့သတင်းအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, ဘက်မလိုက်သတ္တုများပုံသွန်း၏အဖြစ်မှန်အစီအစဉ်များစုဝေး, ရုပ်မြင်သံကြား programming ကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကြံစည်မှုလိုင်းဖန်တီးဖို့ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ metadata ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာအတွက်ရွှေ့ခြင်းငှါအလိုရှိသည့်အတွက်အဆိုပါမြန်နှုန်းအဖြစ်စျေးကြီးတာဝန်များကိုထိုကဲ့သို့သော, လောကီအပေါ်ယူပြီး၏ကစား AI အရဲ့အခြေခံစင်တာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ စာတန်းထိုး, metadata ကိုမှတ်သားခြင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကလစ်မျိုးဆက်။
အဆိုပါ 2019 #NABShow AI အများနှင့်စက်သင်ယူ featuring ပါလိမ့်မည်။ ဤသည်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းတက်ရောက်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြှင့်တင်ရန်ဤအစွမ်းထက် tool ကိုအသုံးချဖို့ဘယ်လိုတစ်ခုနားလည်မှုပေးလိမ့်မည်ဟုမြောက်မြားစွာ session ကိုပျေါလှငျ feature ပါလိမ့်မယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထောက်ပံ့ခြင်း (များစွာကိုအချို့) ကိုမီးမောင်းထိုးပြအစည်းအဝေးများနေသောခေါင်းစဉ်:
Artificial Intelligence နှင့်အတူပြောင်းလဲရုပ်မြင်သံကြား: တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 8 | 10: 30 နံနက် - 11: 00 နံနက် | SL8224 ။ အနှစ်ချုပ်: စားသုံးသူတွေ voice commands ကိုနှင့်အတူတီဗီအကြောင်းအရာရှာတွေ့နေကြပါတယ်။ သူတို့ကထောက်ခံချက်အင်ဂျင်သုံးပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့အဘယ်အရာကိုရွေးချယ်ပါ။ သူတို့ဟာစက်တွေနေဖြင့်လုံးဝရေးစပ်သတင်းပုံပြင်များဖတ်ပါ။ သူတို့ကဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်ကို အသုံးပြု. ၎င်းတို့၏တီဗီထိန်းချုပ်ထားသည်။
Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများအလိုအလျောက် စာတန်းထိုး: တနင်္လာ, ဧပြီ 8 | 2: 40 ညနေ - 3: 00 ညနေ | SU11621 ။ အနှစ်ချုပ်: VoiceInteraction ယင်းထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုမှု-based ဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းစီးပွားဖြစ်နည်းပညာနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ software ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Panel ကို Debate 6: ၎င်း၏တီဗီပွဲဦးထွက် ?: အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ9အဘို့ကို Artificial Intelligence နှင့်စက်သင်ယူအဆငျသငျ့ Is | 4: 00 ညနေ - 4: 40 ညနေ | SU10114 ။ အနှစ်ချုပ်: Artificial ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ကောင်းနည်းပညာနှင့်ကျယ်ပြန့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပူဆုံးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇဝတ်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကားများတိုက်ခိုက်နေ, စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကနေအရာအားလုံးနှင့်အတူဆက်နွယ်နေ, AI အနှင့်၎င်း၏မှေးခငျြးစက်သင်ယူမျိုးစုံစက်မှုလုပ်ငန်းများအနှံ့ buzzwords ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် AI အများနှင့် ML ယနေ့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ...
| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 10: AR, VR, အသံထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စက်ထိန်းချုပ်ရေးမှတဆင့်တီထွင်ဆန်းသစ်: အားကစားဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ် 12: 20 ညနေ - 12: 40 ညနေ | SU11621 ။ အနှစ်ချုပ်: အားကစားဖျော်ဖြေရေး၏လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အားကြီးသောအောက်ပါအချက်များကိုနှင့်အားကစားဖြစ်ရပ်များ၏ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အကြီးအကျယ်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူလူ့အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူသူတို့ရဲ့လွှမ်းခြုံအလှည့်အတွက်ဝင်ငွေကောင်းလာတာပါထားတဲ့တတ်နိုင်သမျှတန်ဖိုးရှိသလောက်စားသုံးသူ, generate လုပ်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာကြ၏။
ဒါ့အပြင် checkout ဖို့သေချာပါစေ AI အ + မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးကျောင်းပရဝုဏ်။ အနှစ်ချုပ်: ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် မှစ. ပြဋ္ဌာန်းဖို့ - တစ်ချိန်တည်းမှာယနေ့မနက်ဖြန်ရဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဘို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိနေချိန်မှာသင်မည်သို့, သူတို့ကပင်သူတို့ကလိုချင်ကိုသိမီသင့်ကြည့်ရှု, နားထောင်နှင့်စာဖတ်သူများလိုချင်တာတွေအဘို့ပြင်ဆင်ရနိုင်သနည်း AI အခုနှစ် Advanced နဲ့ cloud နည်းပညာတိုးတက်ဖြန့်ဝေမှုနည်းလမ်းများမှထုတ်လုပ်မှု Workflows ကနေအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နည်းလမ်းတွေထဲမှာအကြောင်းအရာနှင့်မီဒီယာပုံဖော်ဖို့ဆက်လက်။ CIOs, CTOs နှင့်နည်းပညာသမားသစ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အသစ်ရွေးချယ်မှုများမှာရှာဖွေနေနှင့်အတူ, မိုဃ်းတိမ်ကိုနေဆဲအကြောင်းအရာများအတွက်ကန့်သတ်တွန်းအားပေးနေသည်နှင့် AI အပင်ပိုမိုမြန်ဆန်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်များပါဝင်သည်: AI အ / စက်သင်ယူ / နက်ရှိုင်းသင်ယူ; Big Data; အရာများ၏အင်တာနက်ကို (IoT); voice-Activation; တိုးပွားသိမှတ်ခံစားမှု; ဒစ်ဂျစ်တယ်အမွှာပူး; အဆင့်မြင့် Simulator; ထုထည်ကြီးမားသော Capture အ; အာရုံကြောအင်ဂျင်နှင့်ခန့်မှန်း Technologies က; အဆိုပါအကြောင်းအရာတိမ်တိုက်, edge Technologies က; ငွေကြေး: ကနဦးအကြွေစေ့ယဇ်ကိုပြုရမည် (ICOs) နှင့် Cryptocurrencies; Blockchain; ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေး; Multi-Cloud ကိုမဟာဗျူဟာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ; သဘာဝဘေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်ရေး။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2019-02-26
ယခင်: ပလက်တီနမ်Tools®6NAB Show မှာနယူး Shield Cat7A / 45 RJ2019 ရွေ့ပြောင်း Connectors တင်ဆက်ပေးတယ်
နောက်တစ်ခု: Premiere Pro ကိုအငယ်တန်း Editor ကို